बच्चाको जन्मदिन मनाउने - यो तपाईंको बच्चाको लागि दिन कसरी अविस्मरणीय हुनेछ
स्व-स्ट्रिड भिडियोको साथमा सायद पार्टी
जन्मदिनहरू, छुट्टिहरू र अन्य कार्यक्रमहरूको बारेमा थप पृष्ठहरू
बच्चाहरु को जन्मदिन साना को लागि साल को सबै भन्दा राम्रो दिन हो। कुनै आश्चर्य नगर्ने यो दिन बनाउन को लागी सुन्दर र असाधारण रूपमा आमाबाबुको सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य हो। एक सफल बच्चाहरु को पार्टी संग, जन्मदिन बच्चाहरु को खुशी खडा छ र गिरता छ।
बालबालिकाको जन्मदिनको पार्टी बिना
लोकप्रिय क्लासिक्स पनि एकैछिनै पर्छ। तर आमाबाबुले केहि चीजहरू नयाँ रूपमा प्रस्तुत गर्न मन पराउँछन् जुन अतिथिहरू मध्ये कुनै पनि थाहा छैन। तपाईं पूर्णतया अतिथि सूची र समय रूपमा थप योजना ध्यान सकून्, हामी सबै भन्दा लोकप्रिय, तपाईं को लागि घटना छोराछोरीको जन्मदिन लागि मजेदार र सबै भन्दा adventurous खेल र सुझावहरू संकलित छन्। तपाईं मात्र छान्नु भएको छ!
एक सफल बच्चाहरु को जन्मदिन को लागि सुझाव
घर र बाहिरको लागि बालबालिकाको जन्मदिन खेल
गर्मीमा, सूरज, सनशाइन वा चिसो तापक्रम र जाडो ठोक्किएको छ भने - तपाईले यस पृष्ठमा सबै मौसम र मूडमा बालबालिकाको जन्मदिनका लागि सुझाव पाउनुहुनेछ। शान्त र अवधारणात्मक खेलहरू, शिल्प विचारहरू, विषयवस्तु पक्षहरू, सजावटका लागि सुझावहरू र राम्ररी ज्ञात खेलहरूका लागि निर्देशनहरू व्यक्तिगत शीर्षकहरूमा फेला पार्न सकिन्छ।
तपाइँलाई यहाँ प्रस्तावित लोकप्रिय क्लासिक्समा भिन्नताहरू। साथै, इनाम र मूल्यहरूको प्रश्न तपाईले दुई पटक सोच्नु पर्छ। जन्मदिनको पार्टीमा घरलाई सधैं मीठा हुने छ, वा त्यहाँ सम्भवतः अर्को विकल्प हो?
बाल जन्मदिनहरूलाई मौसमको अनुसार पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्
विशेष गरी रोचक तपाईं जन्मदिनको पार्टी बनाउन सक्नुहुन्छ भने, यदि तपाईं मौसममा अलि कम हुनुहुन्छ। निस्सन्देह, हामी जान्दछौं कि जलबाहक लडाइँहरु केवल 25 डिग्री सेल्सियस माथि मात्र लिन सकिन्छ।
तर खेलकुद र मिठाइको छनौट कसरी क्रिसमसको समयमा रद्द गर्न सकिन्छ? चकलेट र केकको सट्टामा टिन्जिनेन्स र नट? होइन, तपाईले यसलाई जन्मदिनको पार्टीमा सख्त राख्नु हुँदैन। यद्यपि, तर पकाएको सेब र जिन्जरब्रेड घरहरू स्वादिष्ट परिवर्तन हुनेछन्। र पनि एक वायुमंडलीय क्रिसमस शिल्प प्रस्ताव अझै छोराछोरीलाई शान्त पार्न शान्त पार्न एक राम्रो विचार हो।
एक मोमबत्ती छत को बारे मा एक मजबूत क्राफ्टिंग पन्नी को बना? वा पतले पत्तिको पातलो ढोका? वसन्तमा, तपाइँ बच्चाहरु संग फूलपट्टी पेंट गर्न सक्छन् र फूल फूलहरु लाई छिर्न सक्दछ - सबै अतिथि बच्चाहरु को लागि होस्ट को उपहार तयार छ। व्यक्तिगत जन्मदिन पार्टनरहरूका लागि विचार र चयन सजिलै र स्पष्ट रूपमा प्रसिद्ध अनलाइन प्रदायकहरूमा www.firlefantastisch.de.
एक पल्ट एक पटक ... र फेरि प्रत्येक बच्चाको जन्मदिनमा हुन सक्छ। परी कथाहरू हालैमा छन् र प्रत्येक बच्चा नाइट वा राजकुमारीको भूमिका लिन चाहन्छन। के यो राम्रो भएन भने सानो पर्दा कथा पात्रहरू सँगै एक टुक्रालाई पुनरुत्थान गर्न सक्दछ र उनीहरूको आफ्नै उत्पादनको हिसाब हो कि फिलिममा छ? एक थिम पार्टीको लागि यो अचम्मको हाइलाइट तयार गर्न धेरै लाग्दैन।
बालबालिकाको जन्मदिन थीम परी कथा
मिरर, दीवारमा दर्पण, जो उत्सवमा आउँछ भनिन्छ?
त्यसो त निमन्त्रणा कार्डले अतिथिहरू लुकाउन सक्दछ। अब प्रत्येक बच्चाले भविष्यमा सोच्न सक्छ जुन कथा वा पौराणिक प्राणी यो हुन चाहन्छ। शायद होस्टको घरमा धेरै वेशभूषाहरू छन् जस्तै कि टोपी, स्कार्फ, कपडा, मुखौटाहरू र कसैलाई कसैलाई पनि थाहा छैन जुन कुन कुरा थाहा हुन्छ त्यो?
साना ताराहरू भेट्छन्
केक, नींबूले, मार्श्मेलेल र बिस्किट्सको साथ नाइटको खानेकुरामा, हामी पहिला हाम्रा आत्माहरूलाई बलियो बनाउँछौं र हाम्रो विचारहरूलाई प्रोत्साहन गर्दछौं। जहाँ परी कथा खेल हुन सक्छ, कसले कुन भूमिका लिन्छ, जसले प्रमुख भूमिका लिन्छ? अक्सर यो सबै भन्दा कठिन प्रश्न हो, किनकी सबैले नेतृत्वको भूमिका खेल्न चाहन्छ। दुई पासा वा फेंकने सिक्काको क्लासिक तरिका यहाँ स्पष्टता प्रदान गर्न सक्छ। स्क्रिनप्ले लिखित रूपमा चाँडै, यो सुरु हुन्छ।
सम्भवतः सबैले पार्टीको लागि ड्रेस अप गर्नेछन्। यहाँ र त्यहाँ अवश्य पनि बनाइन्छ र पाउडर हुनुपर्छ। मुखौटामा बस्दै र उनको पाठ फेरि सिक्न, निस्सन्देह, यसको भाग हो। पिताजी वा आमा अब क्यामेराबाट कैद गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि साना ताराहरूले ठूलो शोको लागि तयारी गर्छन्। एक सानो ड्रेस रिहर्सल पछि, यो पहिले देखि नै बैठक को कोठा मा छ। बदमामा, आमाबाबुले अग्रिम विचार गर्नु पर्छ कि कोठा कसरी चाँडै एक महल वा नाइट को महल मा परिवर्तित हुन सक्छ। सम्पूर्ण कुरा तनावमा घटाउन हुँदैन र धेरै पैसा दावी गर्दैनन्। फर्नीचरको अवस्थित टुक्राहरू तुरुन्तै एक सानो कौशल संग तान्न सकिन्छ।
लाइट आउट, स्पट अन, पर्दा उठाउनुहोस्
र अहिले यो सुरु हुन्छ। क्यामेरा दौडिरहेको छ र साना अभिनेताहरू चरणमा प्रवेश गरिरहेका छन्। सायद सबै अराजकता बिचमा परिणत हुन्छ, यो राम्रो कुरा हो, किनकि सर्वोत्तम फिलिमहरु र सबैभन्दा सुन्दर सुधारहरु सिर्जना गरिन्छ। यो अद्भुत छैन जब पूरा समूह एक पछि लागी भेटिन्छ र साथसाथै चलचित्र हेर्छ। त्यहाँ साँच्चै हँसिलो छ र फिल्मको बारेमा पनि चर्चा गरिन्छ। यो कसरी साँचो रचनात्मकता साना ताराहरु मा रिलीज गरिएको छ। र कसलाई थाहा छ, सम्भवतः लिङ्ग कोठा बाट आधुनिक परी कथाको2प्रकरण पछ्याउनुहोस्।
गर्मीको दिन तातोको साथ ग्रीष्मकालीन दिनको ट्रेन
बालबालिकाको जन्मदिनका पार्टनरहरूको लागि कथा क्विज
सेन्ट मार्टिन र सेन्ट मार्टिन परेड
हामी किन सेन्ट निकोलस मनाउनुहुन्छ?
क्रिसमसको उपहारहरू फेला पार्नुहोस्
हरेक अवसरको लागि बहिनीहरू